Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. क्षति न्युनिकरणका लागि सरकार सचेत नभएको सांसदको आरोप – Emountain TV
क्षति न्युनिकरणका लागि सरकार सचेत नभएको सांसदको आरोप
काठमाडौं, २८ असार । अबिरल वर्षा सँगै आएको बाढी र पहिरोबाट पीडित नागरीकलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसदको शुन्य र विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरुले वर्षभरी केही नगर्ने तर बाढी पहिरो आउन थालेपछि मात्र तात्ने सरकारको प्रवृतिको आलोचना समेत गरे ।
हरेक वर्ष बाढी पहिरो र डुबानका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ । तर, विपत व्यवस्थापनमा सरकारले पूर्वतयारी भने गर्ने गरेको पाइँदैन । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले सम्भावित जोखिम न्युनिकरणका लागि सरकारले पूर्वतयारी नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
उनीहरुले पूर्वतयारीका साथै बाढी पहिरो र डुबानबाट पीडित भएका नागरिकलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद अमनलाल मोदीले विपत्ति आएपछि मात्र चर्चा हुनेगरेको भन्दै विपत व्यवस्थामानमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरे ।
सांसद प्रेम सुवालले सरकारको लापर्बाहीका कारण भक्तपुर डुबानमा पर्नुका साथै चाँगुनारायण नगरपालिकामा पहिरोमा परी तीन जनाको मृत्यु भएको आरोप लगाए । उनले विपत व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र सावधानीमा सरकार असफल भएको टिप्पणी गरे ।
सांसद रामसहायकप्रसाद यादवले बाढी पहिरोका कारण कयौं सडकखण्ड अवरुद्ध हुँदा परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्न कठिन भएकाले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको मिति सार्न सरकारसँग माग गरे ।
सांसदहरुले सरकारले विपद ब्यवस्थानमा पूर्व तयारी गर्न नसक्दा यसपटक पनि जनता बाढी र पहिरोको मारमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।